Toamasina Miteraka resabe ny fanendrena tompon’andraikitra
Malaza mahay mandray vahiny sy manaja ny soatoavina maha malagasy i Toamasina, ankoatra ny fanajana ny maha samy malagasy amin’ny fananana an’i Madagasikara iray tsy mivaky,
hoy ny fanehoan-kevitry ny tompon’andraikitra ambony iray niasa tao an-toerana. Zava-dehibe izany raha eo amin’ny fomba sy ny fiarahamonina eo amin’ny maha Malagasy saingy ny mifanohitra amin’izay no hita eo amin’ny fijery ivelan’ny fitantanana ny raharaham-panjakana izay fototra iray hampandrosoana an’i Madagasikara, raha ny fanazavana. Maro amin’ireo Talem-paritra misahana ny fitantanan-draharaha miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana ao Toamasina no tsy zanaky ny faritra fa saika ireo avy amin’ny faritra hafa ka mahatonga resabe. Raha ho fampandrosoana ny firenena tokoa no tanjona dia tsy misy tokony hidiran’ny fiaviana sy ny foko na avy aiza na avy aiza ny sehatra fitantanana, hoy ny fanehoan-kevitra. Midika ve izany fa tsy fitiavan’ny fitondram-panjakana ny zanak’i Toamasina tokoa ny tsy fananan’ny zanak’i Toamasina maro an’isa eo amin’ny fitantanana eo amin’ny sehatra samy hafa ao an-toerana sa misy ireo efa mitady sahady hampikatso ny raharaham-pirenena ? Misy lalàna ihany koa ve milaza fa tsy maintsy ny zanaky ny faritra iray niaviany ihany no hisahana ny fitantanana ny raharaham-panjakana ao amin’ny faritra misy azy?